उपेन्द्र खड्का, Author at Shikshapatra
एक नम्बर चितामा जलाउन सर्वसाधारणलाई कुनै पहुँच छैन। दुई नम्बर चितासम्म पनि चर्को शुल्कका कारण सर्वसाधारणको पहुँच हुँदैन। त्यसबाहेकका चितामा भने सर्वसाधारणका शव जलाउन पाइन्छ।
चिकित्सकले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहमा गर्भधारण गर्नु उचित हुने सुझाएका छन्। अठार वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्नु शारीरिक मात्रै होइन मानसिक हिसाबले पनि उचित नहुने मनोविद् केदार ढकालको तर्क छ।
आईसीयूमा तंग्रिदै डा. केसी
स्लाइनबाहेक केही नखाई २८ दिनसम्म निराहार बसेका डा. केसीको शरीर शिथिल थियो। डा. केसीले घरबाटै लगिएको जाउलो र सुप खाइरहेको डा.केसीका सहयोगी सञ्जीव कार्कीले बताए।
विवाहअघि स्वास्थ्य कुण्डली
विवाहअघि जाँच गर्दा एचआईभी नदेखिए पनि विवाहपछि देखिनसक्छ। जोडीमध्ये एकमा यौन रोग हुन सक्छ। स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र विवाह गर्दा यौन रोग सर्ने जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।
करिब एघार बजे शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली डा. केसीलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगे। शनिबार मध्यराति नै दुवै पक्षबीच सम्झौता भयो। सहमति पत्रमा अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सचिव मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको संकेत कुर्दै वार्ता टोली
चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै जुम्लाबाट १९ औं पटकको अनशन सुरु गरेका डा. केसीले सरकारसँग छ बुँदे माग राखेका छन् । शुक्रबार उनले अनशन थालेको २६ औं दिन भइसकेको छ।
दुवै पक्षबीच शनिबार साँझसम्म वार्ता हुन सकेको छैन। सरकारले अनशन फिर्ता लिन डा. केसीलाई आग्रह गरेको छ। डा. केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. क्षेत्रीले शनिबार अनौपचारिक कुराकानी भएको तर सरकारी पक्ष शुक्रबारभन्दा पनि टाढिएको बताए।
नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा तथा माग सम्बोधनका लागि सरकारले वार्ता टोली गठन गरी संवादको वातावरण बनेकाले यसअघि सार्वजनिक गरेको विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर, सरकारले नियमावली बनाउँदा यो कोटा घटाएर पचास प्रतिशतमा झारेकोप्रति केसीको तीव्र असन्तुष्टि छ।
अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दर विद्यालय तहमा संस्कृतलाई अनिवार्य विषयका रूपमा राख्न नहुने तर, ऐच्छिक रूपमा संस्कृत विषय राख्न सकिने बताउँछन्। प्रा.डा. माधवशरण उपाध्याय मातृभाषा वा स्थानीय भाषा पढाइ नभएको अवस्थामा विकल्पका रूपमा संस्कृत विषय अध्ययन गर्न सकिने बताउँछन्।
नेपाल चिकित्सक संघले पनि शिक्षण अस्पतालका आवासीय डाक्टरकाे प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । अहिले चिकित्सकलाई प्रदर्शनमा उत्रिन आह्वान गरिनसकेको तर, सरकारले वार्ताको पहल नगरे सडकमा आउन सक्ने संघका उपाध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले जानकारी दिए ।
डा. केसीको ‘इसारा’ काफी
केही दिनअघि एकजना व्यापारी डा. केसीलाई भेट्न पुगेका रहेछन् । उनले लगानी गरेर अस्पताल खोलिदिने भन्दै केसीलाई अनशन तोड्नसमेत आग्रह गरेका रहेछन्। कार्कीले ती व्यापारीको नाम भने खुलाएनन्।
नेपालका कति व्यक्तिमा ‘बडी डिस्मर्फिक डिसअर्डर’को समस्या छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यो समस्या लिएर उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने व्यक्ति पनि कमै हुनेगरेको मनोचिकित्सक डा. अधिकारी बताउँछन् ।
कानुन कागजमा, झोला बजारमा
सरोकारवालाका अनुसार प्लाष्टिक झोला एकैचोटी प्रतिबन्ध गर्न गाह्रो छ । तर, विकल्प दिएर भने विस्तारै प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण गर्न सकिने वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् ।
महिला मख्ख पर्ने पालो
सामान्यतः ५० वर्षको उमेरममा रजश्वला चक्र रोकिन्छ । रजश्वला चक्र रहुन्जेल महिलामा मुटु रोगको सम्भावना कम हुने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रेग्मी बताउँछन् । रजश्वला चक्र बन्द भएपछि भने महिलामा पनि पुरुष सरह नै मुटुरोगको जोखिम हुन्छ ।
यो तपाईंले गर्नुपर्ने काम थियो, हामीहरूले गरिराखेका छौं,’ डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका छन्, 'तपाईंले हाम्रो माग पूरा गरिदिनुस्, यो साधारण माग हो, ऐनमा पनि आइसकेको छ, माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहनेछ ।’
आफू बिरामी नभएर सत्याग्रही भएकाले माग पूरा हुनासाथ अनशन तोडिहाल्ने डा. केसीको भनाइ रहेको सुवेदी बताउँछन् । केसीको शरीरमा स्लाइन चाहिँ चढाइएको छ ।
संक्रमितलाई हेलाँ : ओझेल परेको मानवता
कोरोनाको कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू अपमानित हुन थालेका छन् । केही साता अघि सिभिल अस्पतालमा कार्यरत कोरोना संक्रमण नभएका स्वास्थ्यकर्मी बसेको होस्टलमै टोलबासी भेला भएर नाराबाजी गरेका थिए ।
वातावरण नजोगाए संकटमा जीवन
घातक रसायनका कारण वनस्पति तथा मानव अस्तित्वमा नै संकट उत्पन्न हुन्छ । जलवायु परिवर्तन तथा ओजन तहको क्षयले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ । श्वासप्रश्वास, फोक्सो, मुटु, आँखाको समस्या साथै यसले क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्ने चिकित्सक भनाइ छ।
प्राथमिक उपचारको ज्ञानले जोगाउँछ ज्यान
चिकित्सकहरूका अनुसार आगो वा कुनै रसायनले पोलेर वा लडेर सामान्य चोटपटक लागेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले साबुनपानीले हात धुनुपर्छ ।